Headline Nepal | १० उपमहानगरमा कसको अग्रता कँहा ?
१० उपमहानगरमा कसको अग्रता कँहा ?
३१ बैशाख, काठमाडौं । देशैभरका ११ मध्ये १० उपमहानगरमा मत गणना भइरहेको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको १७ नम्बर वडामा निर्वाचन हुन बाँकी भएकाले १० उपमहानगरमा मत गणना जारी छ । धनगढी, इटहरी र कलैया उपमहानगरमा भर्खरै मत गणना सुरु भएकाले नतिजा बाहिर आइसकेको छैन ।
त्यस्तै, दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनले अग्रता लिएको छ । अहिलेसम्मको मत गणनामा गठबन्धन तर्फबाट मेयरमा माओवादी केन्द्रका हेमराज शर्माले १७२ मत एमालेका नरुलाल चौधरीको १४५ मत प्राप्त गरेका छन् ।
उता बुटवल उपमहानगरमा कुल १ हजार १ सय मत गणना गर्दा गठबन्धनबाट मेयरमा काँग्रेसले अग्रता लिएको छ। काँग्रेसका उम्मेदवार खेलराज पाण्डेले ४५५ मत ल्याएर अग्रता कायम राखेका छन्। राप्रपाका मेयरका उम्मेदवार मृगेन्द्र शेरचनले २३६ मत र एमालेका बाबुराम भट्टराईले १७९ मत ल्याएका छन ।
त्यसैगरी, हेटौडा उपमहानगरमा कुल ९०४ मत गणना गर्दा एकीकृत समाजवादीले अग्रता लिएको छ। मेयरमा एकीकृत समाजवादीकी मिनाकुमारी लामाले २८३ मत ल्याएकी छिन भने एमालेबाट अनन्त पौडेलले २७३ मत ल्याएका छन्। उपमेयरमा एमालेका उम्मेदवार सुमित्रा काफ्ले ३१९ मत ल्याउँदा गठबन्धनबाट काँग्रेसका उम्मेदवार राजेश बानियाँले ४१८ मत ल्याएका छन् ।
त्यसैगरी जनकपुर उपमहानगरपालिकामा काँग्रेसबाट बागी उठेका मनोज साहले अग्रता लिएका छन्। कुल ५ सय मत गणना हुँदा साहले १७२ मत ल्याएका छन्। एमालेका शिवशङ्कर साहले ५७ मत ल्याएका छन्। गठबन्धनका उम्मेदवार जसपाका लालकिशोर साह ३२ मत ल्याएका छन ।
जितपुर सिमरा उपमहानगर गठबन्धनबाट मेयरमा माओवादीका राजन पौडेलको ५६९ मत,लोसपा सञ्जय साह ५६८ मत, एमाले सरस्वतीदेवी चौधरी २७७ मत ल्याएकी छिन । यस्तै गठबन्धनबाट उपमेयरमा काँग्रेसकी मेगा शाह ६०२ मत,लोसपा बिपी मोक्तान ५६६ मत र एमालेका भोलाप्रसाद अधिकारी २७५ मत ल्याएका छन ।